Izesekeli ze-china ezenziwe ngokwezifiso ze-china, i-Anti - Tip Strap, abakhiqizi befenisha yefektri - i-Dongguan Qiaofeng Plastic Hardware Products Co., Ltd
I-Qiaofeng ibigxile kwifenisha enkulu, ukukhanyisa, i-elekthronikhi, amathoyizi nezinye izimboni ukuhlinzeka ngemikhiqizo yepulasitiki nezinye izinsiza.
imininingwane â – ¶
Qiaofengingahlinzeka ngokuklanywa kwesikhunta nokwenziwa, ukubunjwa komjovo, ukucubungulwa nokuhlanganiswa kwezinsizakalo ezihlanganisiwe.
Sinikeza ukusebenza kahle okuphezulu nesisombululo esiguquguqukayo samakhasimende emigqa ehlukene evela emhlabeni wonke.
Amakhasimende enkampani emhlabeni wonke, futhi ngethemba ngobuqotho ukubambisana nawe!
Ifenisha ekhabetheni izingxenye ABS
I-24W abs plastic outlet drive control junction ebiyelwe
7 * 30mm PE ukunwetshwa plug
I-Dongguan Qiaofeng Plastic Hardware Products Co, Ltd
I-Dongguan Qiaofeng Plastic Hardware Products Co, Ltd, esungulwe ngo-2008 Kusukela yasungulwa, inkampani ibigxile kwifenisha enkulu, ukukhanyisa, i-elekthronikhi, amathoyizi nezinye izimboni ukuhlinzeka ngemikhiqizo yepulasitiki nezesekeli.Imikhiqizo yethu igxile kuzinsimbi zepulasitiki, ihadiwe izesekeli, ifenisha yePlastiki Led Driver Enclosureaccessories, i-Anti-tip funiture, ihange lasendlini, izinyawo zokulinganisela eziguquguqukayo, isivikeli sekhoneni lepulasitiki, Isilawuli kude, iLampshade, ikhebula uthayi, ubakaki, Ifenisha / Ukukhanyisa / Ukuxhumeka kwe-elekthronikhi nezinsimbi zokubopha, njll. Manje sikhonza amakhasimende emhlabeni wonke. Le nkampani inemishini eminingi yokukhiqiza umjovo othuthukile kanye nemishini yokukhiqiza isikhunta epulasitiki, enganikeza ngezinsizakalo ezihlanganisiwe zokwakhiwa kwesikhunta nokukhiqiza, ukubumba umjovo, ukucubungula kanye ne-assembly.We futhi samukela ukuhleleka nephakethe le-OEM / ODEM. sizokunikeza intengo engcono kakhulu nensizakalo.
Ifenisha yePlastiki isiphenduke amandla amasha embonini yefenisha
Ngokuthuthuka okuqhubekayo kwesidingo sokuvikelwa kwemvelo, inkathi "enokhuni lweplastiki" iyeza, ifenisha yepulasitiki enesicelo sombala ogqamile nesitayela semfashini kancane kancane iba amandla amasha embonini yefenisha.
Izesekeli zefenisha yasehhovisi zidinga ukusebenzisa ini?
Izesekeli zepulasitiki ze-Hardware zisetshenziswa kakhulu empilweni, kuzosetshenziswa ifenisha ethile, kepha futhi idlala indima ebaluleke kakhulu, ifenisha yehhovisi ikakhulu ibhekisa kufenisha efanelekile ehhovisi, ekufakweni nasekukhiqizeni kusadinga ukuxhaswa kwezinye izesekeli, khona-ke izeseke...
Imibuzo mayelana nemikhiqizo yethu noma pricelist, sicela ushiye ikheli lakho kithi thina sizothintana emahoreni angu-24. Sizohlinzeka ngentengo nensizakalo enhle kakhulu.